आलुमा गुलाब छे’डेर राखी मात्र एक हप्तामा हेर्नुहोस् देख्नुहुनेछ चमत्कार ! – Dailny NpNews
आलुमा गुलाब छे’डेर राखी मात्र एक हप्तामा हेर्नुहोस् देख्नुहुनेछ चमत्कार !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २५, २०७७ समय: ९:३३:४२
काठमाडौं- सबैलाई सुगन्धित फूलहरू मन पर्छ । राम्रो सुगन्धको फूलले सम्पूर्ण घरमा एक आ’रामदायक वातावरण दिन सक्छ । फूलहरू स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो ।प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै बगैचा बनाउन सक्दैन ।
तसर्थ, हामी केहि तरिकाहरू बताउँछौं जसद्वारा तपाईं आफ्नै बोट बिरूवा उ’मार्न सक्नुहुन्छ । सबै चाहान्छन् कि घर गुलाफको सुगन्ध जस्तो सुगन्धको आभास । यो एक अचम्मको विचार हो, तर तपाईं बगैंचा बिना घरमा गुलाफ रोप्न सक्नुहुन्छ ।
गुलाफ रो’प्नका लागि आवश्यक सामग्री-हामीलाई गुलाब उ’ब्जनी गर्न धेरै चीजको आवश्यक छैन । हामी यसलाई थोरै लागतमा घरमा बनाउन सक्छौं । पहिला गुलाफ, आलु, भाँडो, प्ला’स्टिकको बोतल, माटो तयार गर्नुहोस् ।
आलुमा गुलाफ लगाउने विधि-पहिले गुलाबको फूल लिनुहोस् र त्यसका पातहरू ह’टाउनुहोस्। यसको माथिल्लो भाग का’ट्नुहोस्। एउटा आलु लिएर यसमा प्वाल बनाउनुहोस्। त्यो प्वालमा गुलाबको डाँठ राख्नुहोस्। अब माटोको भाँडाको आधा भाग भर्नुहोस् र त्यसमा आलुहरू राख्नुहोस्।
बाँकी भाँडो माटोले भर्नुहोस्। एउटा प्लास्टिकको बोतल लिनुहोस् र यसलाई तलबाट का’ट्नुहोस्। बोतल गुलाब पेटीओलमा लगाउनुहोस्। उसलाई हरेक दिन पानी दिनुहोस् र एक हप्ता पछि हेर्नुहोस्। तपाईले यस प्रकारको गुलाब कहिल्यै देख्नुहुने छैन। त्यहाँ जरा पात आइसकेको हुन्छ ।
एक हप्ता पछि, फूल यस गुलाफ डाँ’ठबाट फु’ल्न थाल्छ ।यो एउटा फूलको साथ तपाईंको सम्पूर्ण घरको वातावरण रो’चक हुन्छ । तपाईं यस बोटलाई भान्छामा राख्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईलाई स्फू’र्ति पनि दिनेछ ।